Fahasalamana: Finday Ampiasaina Ho Amin’ny Fahasalamana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2018 7:08 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Português, Français, English
Ampiasaina ho amin'ireo tolotra momba ny fahasalamana ireo finday ankehitriny, miainga avy amin'ny sehatra fiarovana ny VIH/SIDA mipaka amin'ireo fampatsiahivana ho fisarihana ireo olona hanao vakisiny fanefitra. Tamin'ny volana lasa teo, nanamarika ny Fikambanana Rockefeller, ny Fikambanana avy amin'ny Firenena Mikambana, ary ny Fikambanana Vodafone fa mamporisika ny karazana tetikasa sahala amin'itony izy ireo amin'ny alalan'ny famoronana fiarahamientana finday ho an'ny fahasalamana (afohezina hoe mHealth) [amin'ny fiteny anglisy, sahala amin'ireo blaogy voatanisa rehetra]. Ilay fiarahamientana, nolazaina teo amin'ny Fihaonambe erantany mikasika ny finday, dia hanamora ireo tetikasa izay mampiasa ny finday ho an'ny resaka fahasalamana sy asa, iarahana miasa amin'ireo vondrona ara-panjakana sy tsy miankina mba hampiroboroboana ireny finiavana ireny. Ny tanjona dia ny hanararaotana ny fampiasana ireo finday tena miparitaka be ireo any amin'ireo firenena vao misondrotra – ny 64 isan-jaton'ireo mpampiasa finday dia saika avy amin'ireo firenena andalam-pandrosoana avokoa.
Manamarika i Erik Hers Man, eo amin'ny blaogy White African hoe hatraiza ireo tolotra finday momba ny fahasalamana no tena mafotaka ankehitriny eny amin'ireo fikambanana mpanao asa soa sy ireo Fikambanana Tsy Miankina (ONG), raha mitehaka an'ilay finiavana kosa ny blaogin'ny Social Justice, amin'ny filazàna fa:
.”Karazana fiandraharahàna sosialy ataon'ireo orinasa io izay mahafinaritra ny mahita azy – ny teknolojia mamaly ny filàna sosialy maika… Mampiasa ny teknolojia ilay fiarahamientana MHealth mba hanomezana mpitsabo virtoaly ho an'ireo miaina ao anatin'ireo sehatra ambanivohitra, anisan'izany ny any India, ny any Oganda ary ny any Afrika Atsimo.”
Namboraka tatitra iray ihany koa ny fiarahamientana mHealth nandritra ny fivoriana atao hoe mHealth ho an'ny fampandrosoana, izay mandinika karazana fandaharanasa maro samihafa any anatin'ireo firenena andalam-pandrosoana ka miantso ny finday mba hanatsara ny fahasalamam-bahoaka. Ny tatitra dia mampiseho fandaharanasa miisa 51 efa am-perinasa, na izay efa ho ampiharina amin'ny hoavy any amin'ireo firenena 26, ary mampiseho fa mihanaka kokoa manerana an'i India, Afrika Atsimo, Oganda, Peroa ary Roanda, ireo fandaharanasa ireo. Manome ny lisitr‘ireo tetikasa 51 ny Blaogy 3G Doctor ary mamaritra ilay tatitra hoe:
«Avy aty amin'ny Fihaonambe Manerantany momba ny Finday eto Barcelone aho no mandeha azy ity, nandritra ny fandefasana tatitra iray izay mikasa hamaritra ny mHealth (fahasalamana mandehandeha) ; manoritsoritra ny fahafahan'ireo finday manatsara ny fahasalamana ao anatin'ny tontolo andalam-pandrosoana ; mitily ireo dingana ilaina ho an'ireo fandaharanasa mahomby, maharitra ary azo ampiharina amin'ny “fahasalamana mandehandeha” (mHealth) ; manaporofo ny tombontsoan'ireo mpiara-miasa mifanome tànana mivondrona anatin'ireo tetikasa ho an'ny “rojon-kasina” ananan'ny fahasalamana mandehandeha… Mandefa antso iray ihany koa mba hamoronana rantsana iray iraisampirenana mahaleotena, mba hamporisihana ny fiarahamiasa eo amin'ny sehatra isankarazany sy isam-paritra, mba hampiasana ny herin'ireo tambajotra sy ireo fitaovana finday ho fanatsaràna ny fanelezana ireo tolotra momba ny fahasalamana, ao anatin'ny tontolo andalam-pandrosoana»
Ny tatitra dia mandinika ireo tetikasa sahala amin’ ny tetikasa Masiluleke (na ny tetikasa M) ao Afrika Atsimo, tolotra iray mifototra amina fandefasana SMS mampahafantatra laharana maitso ho an'ireo mararin'ny SIDA ary mandefa ireo torohay momba ny VIH/SIDA. Ny tetikasa SIMpill dia fandaharanasa hafa iray ao Afrika Atsimo ; mampiasa baoritra kely misy ireo fanafody miaraka amina ‘karatra SIM’ izy io izay mampilaza ireo mpiasan'ny fahasalamana raha toa tsy mihinana ara-dalàna ny fanafodiny hiadiana amin'ny toberkilaozy ireo marary. Noho ny SIMpil, niainga tamin'ny 22 ka tonga 90 isanjato ny isan'ireo olona manaraka ny fitsaboana azy ireo, SIMpil izay ampiasaina ihany koa any amin'ireo firenena toa an'i Thaïlandy. Nalefa ihany koa ny tetikasa hafa iray antsoina hoe Cell-PREVEN ao Però. Manoritsoritra ilay tetikasa eo amin'ny tranonkalany i Mahmud Hussein:
Tokony ho tanterahana ireo fampiasambola anatin'ireny fandraisana andraikitra mandehandeha mikasika ny fahasalamana ireny, sahala amin'ilay natao tao Però vao haingana, antsoina hoe tetikasa
Cell-Preven. Andiam-pitsabo iray mandehandeha, ahitana vondrona kely iray misy mpiasan'ny fahasalamana matihanina, nalefa ho any amin'ireo vondrom-piarahamonina voafidy. Afaka mahazo fitsirihana ara-pahasalamana, araka izany, ireo olona eo an-toerana ho an'ireo aretina sahala amin'ny malaria sy ny toberkilaozy, ireo aretina mifindra amin'ny alàlan'ny firaisana, ary ireo fitsaboana ho an'ireo mpampanofa vatana. Ny tarika dia mifandray amin'ireo mpitsabo amina faritra hafa amin'ny alalan'ny aterineto/finday (amin'izay toerana misy izany) na amin'ny alàlan'ny zanabolana, azo zaraina amin'ireo tarika roa samihafa ny vaovao ary afaka entina amin'ny fotoana maha-mety azy ny fanampiana.”
Mandray ampahombiazana ny tatitry ny mHealth i Nick Hunn, ao amin'ny Creative Connectivity, izay, aminy dia maneho tsara ireo fomba isankarazany mety hilàna ny finday.
«Izay no anton'ny nadraisana tsara ilay tatitra ” Mpitsabo iray manaraka anao”. Tsipihany fa tsy modely tokana ihany no tokony ho arahana. Samy manana vondrom-pahavitrihana sy lasibatra tena samihafa ny tsirairay amin'ireo firenena natolotra ho toy ny ohatra. Amin'ny iray, lehilahy tanora ireo mpampiasa voalohany. Amin'ireo hafa kosa, ireo renim-pianakaviana. Amin'ireo tranga rehetra, mankasitraka ilay tolotra ireo mpampiasa ary mahita fa ilaina ilay izy. »
Na eo aza ireo fampanantenana ireo, mbola mailomailo ihany ireo olona amin'ny fahafahan'ny teknolojia finday hanatsara ireo tolotra momba ny fahasalamana. Manindrya mazava ny tsikera iray teo amin'ny lahatsoratra natokana ho an'ny fiarahamientana mHealth fa tsy ho afaka hanoloana mandrakariva ny fitsaboana ataon'ny tena mpitsabo akory io teknolojia io. Manoratra ny namana Singh d'Arun hoe:
« Matetika ny fitsaboana tsy tanteraka raha tsy misy fifandraisana mivantana eo amin'ny mpitsabo sy ny marary. Afaka mitondra tombontsoa somary maivana ihany ny fampiasana ny teknolojia, nefa hahazo tombontsoa bebe kokoa amin'ny fanofanana ireo mpitsabo sy ireo mpanampy mpitsabo any aminy ireo firenena andalam-pandrosoana.
Tsy misy maharesy ny fanabeazana. »
Sarina finday goavana an'i Samantha celera ao amin'ny Flickr